အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစေမလဲ။ အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များ စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုဖွင့်နည်း
အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏နှစ်သက်မှုကိုရရန်မလွယ်ကူပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကအမျိုးသမီးတွေလိင်အကြောင်းဘယ်လိုစဉ်းစားသလဲ၊ ယောက်ျားတွေရဲ့လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကွဲပြားခြားနားမှုကိုနားမလည်လို့အမှားတွေများလေ့ရှိတယ်။ လူအများစုကမသိဘူး အမျိုးသမီးတစ် ဦး စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ဘယ်လို သူတို့ဘုံအမှားတွေလုပ်တက်အဆုံးသတ်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အိပ်ရာဝင်ရာတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်ရန်နှင့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုမည်သို့စိတ်လှုပ်ရှားစေနိုင်မည့်အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သမျှကိုသင့်အားသင်ပေးပါမည်။
2 အမျိုးသမီးတစ် ဦး စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်လှည့်ကွက်
3 အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုဖွင့်သည့်အခါအမှား
အမျိုးသမီးများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရယောက်ျားများနှင့်မတူပါ၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်သော်လည်းစက္ကန့်နှစ်မိနစ်တွင်သူတို့သည် ၀ မှ ၁၀၀ အထိမသွားနိုင်ပါ။ သူတို့နှင့်အတူသင်သူတို့ကိုနွေးထွေးစေမည့်အချိန်အနည်းငယ်ဖြုန်းရမည်။ သင်နှင့်သူမအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုကိုသင်ဖန်တီးရမည်။ ၎င်းတွင်ထုံးနှင့်သဲတို့ပါဝင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာရှေ့သို့လှမ်းသေးငယ်။ ခြေလှမ်းသေးသေးလေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူ့ကိုနမ်းရှုပ်ပြီးအနည်းငယ်နှေးကွေးစေသည်။ ဤစစ်ပွဲအားဖြင့်သူ့ကိုအိပ်ရာဝင်ချိန်၌စောင့်စေသည်.
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အချိန်တန်လျှင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုချစ်စရာကောင်းသော၊ ပျော်စရာကောင်းသောဂီတဖွင့်ရန်၊ အလင်းရောင်မှိန်စေရန်နှင့်သင့်ပုံရိပ်ကိုဂရုစိုက်ရန်၊ sexy အတွင်းခံအဝတ်အစားများနှင့်ရေမွှေးများကိုဝတ်ဆင်ရန်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်စီစဉ်သင့်သည်။ သင်၏အသက်ရှု။ အကယ်၍ သင်အရင်ညစာစားမည်ဆိုလျှင်သွားဖုံးသို့မဟုတ်သွားများသွားတိုက်ရန်အခွင့်အလမ်းမရှိပါကသွားဖုံးသို့မဟုတ်သင့်အသက်ရှုခြင်းကိုတိုးတက်စေသည့်အရာတစ်ခုခုယူဆောင်လာခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အမျိုးသမီးတစ် ဦး စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်လှည့်ကွက်
caress အရေးကြီးပါသည်: သူမ၏ထိခြင်း၊ လက်များကိုနောက်သို့ချခြင်း၊ နှုတ်ခမ်းဖြင့်စိုစွတ်နေခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ကောင်းသောအကြံတစ်ခုအနှိပ်နှင့်စတင်ရန်ဖြစ်သည်။
မျက်စိထဲမှာသူမ၏ကြည့်ရှုပါဥပမာ - သူမကိုထိုးတာ၊ ဆံပင်ကစားတာတွေကအမျိုးသမီးတွေမျက်လုံးချင်းဆုံရတာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်။
နားထဲမှာတီးတိုး: တီးတိုးစကားသည်အမျိုးသမီးများအတွက်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်။ မှန်ကန်သောစကားလုံးများကိုရွေးချယ်ပြီးပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားပါနှင့်။
သူမ၏ကစားသမားကိုလှုံ့ဆော်ပါ။ မင်းကိုသူမကိုမမေ့နိုင်တဲ့အော်ဂဇင်ရှိစေချင်တယ်ဆိုရင်သူမရဲ့အစေ့ကိုချော့မော့ပြီးလက်ချောင်းတွေကိုစိုစွတ်ပါ၊ မဖိပါနဲ့၊ ထို့နောက်သင်၏အတွေးအခေါ်အတိုင်းလိုက်နာ။ သင်၏ဘာသာစကားကိုဆက်လက်သုံးနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင့်ဘာသာစကားကိုအလွန်အကျွံမသုံးပါနှင့်စက်ဝိုင်းငယ်များဆွဲခြင်း။
သင်၏အချိန်ကိုယူ: အနည်းဆုံးအစပိုင်းတွင်ထည့်သောအခါ၊ မြန်သောနှုန်းဖြင့်ပြုလုပ်ပါ။ သူမကသင့်ကိုမြန်မြန်သွားခိုင်းမယ်၊ အနားယူပါ၊ သူဟာပိုပြီးအားရှိမယ်၊
ယုံကြည်မှုအလွန်အကျွံမတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့။ သူနှစ်သက်မယ်လို့ထင်တဲ့တစ်ခုခုကိုစမ်းကြည့်ပါ။ ဦး စွာကြိုးစားကြည့်ပါ။ အဖြေကောင်းတစ်ခုတွေ့ရင်မင်းထပ်ကြိုးစားကြည့်ပါ ဦး ။ သာဓကအားဖြင့်နို့သီးခေါင်းသည်အမျိုးသမီးများအတွက်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောနေရာဖြစ်သော်လည်းအချို့သောသူများသည်နူးညံ့သောဆက်ဆံမှုကိုနှစ်သက်ကြပြီးအခြားသူများကမူ ပို၍ စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။ သူ၏နို့သီးခေါင်းကိုအရင်ဖြည့်တင်းပါ။ အကယ်၍ အဖြေကကောင်းတယ်ဆိုရင်၊
အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုဖွင့်သည့်အခါအမှား
ဆောင်းပါးအစတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအမျိုးသမီးတစ် ဦး အားဖွင့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအမှားများစွာရှိသည်။ သူတို့ကဘာလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။
တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုနှင့်အတွင်းခံအဝတ်အစားများကိုဂရုမစိုက်ခြင်း။ ကောင်းမွန်သောအနံ့နှင့်သင့်လျော်သောအတွင်းခံအဝတ်အစားများကိုဝတ်ဆင်ရန်အရေးကြီးသည်။ ဟုတ်ပါတယ်အိပ်ရာထဲမှာခြေအိတ်မဝတ်ရ၊
အာရုံမပျံ့လွင့်ပါစေနှင့်ဖြေ - သင်လုပ်နေတုန်းဖုန်းကိုကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုကြောင့်အာရုံပျံ့လွင့်ခြင်းကအခုအချိန်မှာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်။
ကွန်ဒုံးပြင်ဆင်ပါ။ သေတ္တာကိုဖွင့်ပြီးကွန်ဒုံးကိုခွဲထားဖို့မလိုပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ကွန်ဒုံးကိုပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုလျှင်၎င်းကိုသေတ္တာထဲမှထုတ်ပြီးခွဲထားပါကဤစက္ကန့်အနည်းငယ်သည်သင်သိမ်းဆည်းနိုင်သည့်အရေးကြီးသောအချိန်ဖြစ်သည်။
စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောပတ်ဝန်းကျင်မရှိပါ ဂီတကောင်းသောနှင့်နူးညံ့သောအလင်းရောင်သည်အရာများကို ပို၍ စိတ်လှုပ်ရှားစေသည်။
အရမ်းကြမ်းလွန်းနေတယ် ညင်ညင်သာသာနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းနမ်းရမယ်၊ များများစားစားနဲ့ကြမ်းတမ်းလွန်းတာထက်အနမ်းကောင်းနည်းနည်းပေးတာကိုအာရုံစိုက်တာကပိုကောင်းတယ်။
Clitoris သည်မှော်ခလုတ်ကဲ့သို့မဟုတ်ပါ။ ဤနေရာကိုသာအာရုံစိုက်ရန်မလိုအပ်သော်လည်းအခြားအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည့်အခြားအမျိုးသမီးနေရာများလည်းရှိသည်။ အဲဒါကိုအလွဲသုံးစားမလုပ်ပါနဲ့
အမျိုးသမီးများကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေခြင်း၏ပထမခြေလှမ်းမှာ၎င်းတို့အားအဘယ်အရာကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်ကိုသိခြင်းဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသမီးများသည်အာရုံနှင့်ထိတွေ့နိုင်သောလှုံ့ဆော်မှုများကြောင့်နိုးထလာနိုင်သည်။ ဤအချက်ကို အခြေခံ၍ အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်ကြံစည်မှုပုံပြင်များ၊ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများဆိုင်ရာအသေးစိတ်များကြောင့်လှုံ့ဆော်ခံရသည်။ ၎င်းသည်သူမကိုယ်တိုင်သူမ၏စိတ်ကူးစိတ်သန်း၏အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်ဟုခံစားရစေသည်။ အနံ့၊ အရသာနှင့်အမြင်အာရုံကောင်းခြင်းစသည့်အခြားလှုံ့ဆော်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ထပ်မံထည့်သွင်းပါကအောင်မြင်မှုကိုသေချာစေသည်။
အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေရန်အကြံဥာဏ်များသို့မဟုတ်လှည့်ကွက်များနှင့်ပတ်သက်သောအခါအရေးကြီးဆုံးအရာမှာဆက်သွယ်ရေးဖြစ်သည်။ တိုက်ရိုက် (စကားပြော) သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုတုံ့ပြန်မှုကိုအာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်သူမ၏ ဦး စားပေးများကိုနားလည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအမျိုးသမီးကိုနှိုးဆွသောအခါမည်သည့်အချိန်၌ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမည်ကိုကောင်းစွာသိပြီးဖြစ်သည်။ သင်ချိန်းဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်သောအခါသူတို့သည်အလွယ်တကူမမြင်နိုင်သော်လည်းဇီဝကမ္မဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအချို့ကိုသင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံသင်သူတို့ကိုဖမ်းယူရန်အလွန်သတိထားရမည်။ ဒီ signal တွေကဘာလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။
အဆိုပါ Clitoris ရောင်၏ glans ။
အရေပြားနီခြင်း (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖလပ်) ။
နှလုံး frecuency ၏ incrise ။
သူတို့၏အပြုအမူများ၊ တုံ့ပြန်မှုများနှင့်မှတ်ချက်များပြောင်းလဲမှုများကိုလည်းလေ့လာနိုင်သည်။ ဤလက္ခဏာများအားလုံးနှင့်အတူအမျိုးသမီးသည်သက်သောင့်သက်သာရှိ၊.
သင်မြင်သည့်အတိုင်းအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုမှန်ကန်စွာမည်သို့ဖွင့်ရမည်ကိုလေ့လာရန်စိတ်ထဲထားရမည့်အရေးကြီးသောအချက်အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ သို့သျောလညျးသငျသညျသငျသညျတှေ့ဆုံမယ့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အသီးအသီးမှ extrapolated နိုင်ပါတယ်သတိရရပေမည်။ ထို့ကြောင့်လူတစ် ဦး ချင်းစီတွင်ညွှန်ပြသည့်အရာကိုအာရုံစိုက်ပါ။
ဒီအချက်အလက်တွေနဲ့အတူအမျိုးသမီးတစ် ဦး ဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုတာကိုသင်လေ့လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » fit » စုံတွဲနှင့်လိင် » အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုဖွင့်နည်း